statistiques (my) - Traduire SPIP
Traduction du module "statistiques" de fr vers my
item_gerer_statistiques Gérer les statistiques des visites ​စာရင်းအင်းများကို စီမံခန့်ခွဲပါ 2013-09-29 21:07:48 Modifié Modifier
icone_evolution_visites Évolution des visites<br />@visites@ visites ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုအဆင့်<br />@visites@ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
icone_repartition_actuelle Afficher la répartition actuelle လက်ရှိထုတ်ဝေမှုကို ထုတ်ပြပါ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
icone_repartition_visites Répartition des visites ထုတ်ဝေမှု အခြေပြဇယားများ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
icone_statistiques_visites Statistiques အခြေပြဇယား 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_affichier_visites_articles_plus_visites Afficher les visites pour <b>les articles les plus visités depuis le début :</b> <b>ကနဦးမှစ၍ ဆောင်းပါးအများဆုံး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများကို ပြပါ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_comment_lire_tableau Comment lire ce tableau ဂရပ်ဖစ်ဖတ်ရန်နည်းလမ်း 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_forum_statistiques Statistiques des visites ဝက်ဆိုက်တွင် ဝင်ရောက်လည်ပတ်သူများစာရင်း 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_popularite_2 popularité du site : ဝက်ဘ်ဆိုက်ထင်​ပေါ်ကျော်ကြားမှု 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_popularite_3 popularité : @popularite@ ; visites : @visites@ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု - @popularite@; ဝင်ရောက်လည်ပတ်သူများ @visites@ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_popularite_5 popularité : ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_visites visites : လာလည်သူများ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_visites_plus_populaires Afficher les visites pour <b>les articles les plus populaires</b> et pour <b>les derniers articles publiés :</b> <b>အကျော်ကြားဆုံး ဆောင်းပါးများ</b> နှင့် <b>နောက်ဆုံး​ထုတ်ဝေ​သော ဆောင်းပါးများ</b>အတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများကို ပြပါ 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
info_zoom zoom အ​ကြီးချဲ့ရန် 2013-09-29 21:07:48 Traduit Modifier
onglet_origine_visites Origine des visites အ​မှန်တကယ် လာလယ်သူ 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
onglet_repartition_debut depuis le début အစကနဦးမှ 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
onglet_repartition_lang Répartition par langues ဘာသာစကားအလိုက် ထုတ်ဝေခြင်း 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
texte_comment_lire_tableau Le rang de l’article, dans le classement par popularité, est indiqué dans la marge ; la popularité de l’article (une estimation du nombre de visites quotidiennes qu’il recevra si le rythme actuel de consultation se maintient) et le nombre de visites reçues depuis le début sont affichés dans la bulle qui apparaît lorsque la souris survole le titre. ဆောင်းပါး၏ အဆင့်အတမ်း၊ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှု အုပ်စုများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဆောင်းပါး၏ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှု (နေ့စဉ်လာရောက် ဖတ်ရှုခံရမှု အရေအတွက်) နှင့် ကနဦးအစမှ လာရောက် လည်ပတ်သူများစာရင်း ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြပါဇယားထဲရှိ ခေါင်းစဉ်ပေါ်တွင် mouseကို တင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့နိုင်သည်။ 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
texte_signification Les barres foncées représentent les entrées cumulées (total des sous-rubriques), les barres claires le nombre de visites pour chaque rubrique. ဘားအနက်သည် တိုးပွါးသည့် ထည့်သွင်းမှုကို ကိုယ်စားပြုသည် (အပိုင်းခွဲစုစုပေါင်း), လင်းသောဘားများသည် အပိုင်းလိုက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများအရေတွက်ကို ကိုယ်စားပြုသည် 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
titre_evolution_visite Évolution des visites ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှုအဆင့် 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
titre_liens_entrants Liens entrants ဆက်သွယ်မှု အဝင် 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
titre_page_statistiques Statistiques par rubriques အခန်းကဏ္ဍအလိုက်စာရင်းများ 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier
titre_page_statistiques_visites Statistiques des visites ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများစာရင်း 2013-09-29 21:07:49 Traduit Modifier